Yikuphi okungcono: "Samsung" noma "iPhone"? Umzabalazo ngobuholi brand
Ngo engu kolwazi nobuchwepheshe, ukuthuthukiswa ngokushesha emakethe eselula ngezinye izikhathi kakhulu impela kunzima ukuba wenze isinqumo esivuna kunoma iyiphi ifoni ethile. Lena inkinga ezibhekene iningi abasebenzisi mobile amanethiwekhi zokuxhumana. Ngemuva kocwaningo okuncane umkhakha imidondoshiya sizama ukuthola ukuthi kungcono, "Samsung" noma "iPhone".
Kule minyaka embalwa edlule emakethe zamadivayisi eselula ngenkuthalo wayithatha Smartphones evumela zabanikazi ukuba baphathe ephaketheni lakhe computer cishe real, kodwa ngezinga ezincane. Uma senza ukuhlaziywa kancane, singazibona umehluko eziyisisekelo kakhulu phakathi kwawo wonke zobuchwepheshe. Lawa amanani. Ngokusho izinga labo bonke omakhalekhukhwini zingahlukaniswa ngamaqembu amathathu. Isigaba sokuqala sihlanganisa amadivayisi ngaphandle eziningi imisebenzi eyengeziwe, ne sebhithi lula, kunalokho ukhwaliti ongaphakeme ubonisa, amakhamera kanye nokunye ukucacisa. Intengo uphansi - ku ekupha ama-ruble ayizigidi 5-6. Ukuze ingane, ukhetho ezifanele kakhulu. wemboni Landelayo - isilinganiso intengo isigaba. Smartphone alesi sigaba ngokuvamile ehloniphekile base lobuchwepheshe, eliphezulu kanye nezinye izinkomba futhi ngempela eliphezulu. Inani - ruble ayizigidi 10-20. kumadivayisi we-premium kufanele okusezingeni eliphezulu izici lobuchwepheshe kanye hardware. intengo zabo iqala kusukela ama-ruble ayizigidi ezingu-20.
Indlela ukunquma on ukuthengwa
Yikuphi okungcono: "Samsung" noma "iPhone"? Umbuzo uwukuthi mphendvulo kanye has impendulo ecacile. Futhi nenye brand has abameli bayo futhi abantu abamelene nani. Kodwa kubalulekile lapho ekhetha igajethi namanje uqale kusuka tekusebentisa afanelekile ongakhetha. Uma uqhathanisa ukwenza kwe-"iPhone 5" futhi "Samsung-4", kungenzeka ukuhlonza eziningi umehluko, kunalokho sina umsebenzisi. Bobabili amadivayisi eseqophelweni eliphezulu, ngakho-ke, yiba kakhulu ukusebenza lobuchwepheshe. Umehluko wokuqala omkhulu amagajethi ezimbili - kuba yobukhulu bawo. "Samsung" kuzidlula umkhiqizo inkampani kusukela Lake, izilungiselelo zalo zimi kahle zilungele ezingosini ze-Internet, ubukele amavidiyo, ama-movie, izithombe. Nokho, Ergonomics bampofu. Usayizi enkulu ifoni kudala izimo ezithile zomnikazi. "IPhone" ngosayizi isihenqo 4 amayintshi ukhululekile kakhulu esandleni, lokuhamba kungenziwa ngesandla esisodwa, akesabi ukulahla smartphone yakho. Yini ukukhetha: "iPhone 5" noma "Samsung-4" - kuyinto ngokuphelele kuyisinqumo somuntu siqu. Futhi, izindlu "apula" zedivayisi senziwa ehlukahlukene yocezu olulodwa-aluminiyamu, okuyinto ulunika isimo esihle. "Samsung" eyenziwe ngepulasitiki, okuyinto lula ke emehlweni abasebenzisi.
Yikuphi OS ukukhetha
Ukuze abathengi abaningi ezingaba okuphawulekayo umbuzo yesistimu yokusebenza elawula smartphone. Lapha, phakathi amamodeli Korean nabakhiqizi American futhi une umehluko omkhulu. Yikuphi okungcono: "Samsung" noma "iPhone"? Omunye - ngesisekelo "Android", owesibili - esekelwe OSI ngokulandelana. "I-Android" okuningi ukugxekwa, kodwa esilinganayo okubuyayo. Kungenzeka ukuba ngokuqiniseka ukuthi lesi simiso yokusebenza ilula, okuthembekile kuqhathaniswa, has izicelo eziningi, kodwa ngokuvamile kuba sengathi ayinyakazi uma sicubungula esiningi ulwazi, ngokungalungile ubonisa ongakhetha ukulayisha idatha. IOS efakwe "Apple" inkampani ekukhiqizeni, egijima kahle, iziphethe ngokuqiniseka ukusingatha amafayela amakhulu, ukusebenza ifoni kuphezulu. Nokho, kukhona eziningi ukulinganiselwa, okuyinto kunciphisa udumo sohlelo phakathi abasebenzisi smartphone. Sound, ukucinga indikimba yendaba izinga, futhi ingxenye ikhamera hardware kumadivaysi womabili high futhi abanalo umehluko omkhulu ngoba umuntu ovamile e nemingcele. Ngakho-ke, kungcono "Samsung" noma "iPhone" - kungcono wena kuphela.
Iphutha 619 ( "MTS Xhuma"): ukuthi kusho, yini okufanele uyenze futhi indlela yokulungisa?
Indlela ufake ikhadi le-SIM ku-iPhone 4: Imiyalelo
Ukubuyekezwa kwe-Nokia 1208 iselula
Vula izici ezifihliwe: ngokwezifiso firmware ngokuba PS3 iPhone 3G
Berokka plus - yokusetshenziswa.
Esishelelayo Systems: izitayela esethiwe
Izimiso - iyona imibhalo ezibaluleke kakhulu
Swedish Krona. Dynamics of the Krona Swedish (SEK) kuya ruble, dollar, euro
Chamomile. Isicelo uyosindisa asemrarweni